‘सार्क डेथजोन’मा नेपालले बच्चाउने प्रयास ! «
‘सार्क डेथजोन’मा नेपालले बच्चाउने प्रयास !
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १५:२७
न्यूयोर्क- सार्क डेथजोनमा, नेपालले बच्चाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बिहीबार बसेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) को बैठकमा भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । पाकिस्तानसँगको तनावका कारण भारतीय विदेशमन्त्री सु्ष्मा स्वराजले आफ्नो भनाइ राखेपछि बीचमै बैठक छाडेर हिँडिन् । यसैबीच नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बाहिर दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क ) मन्त्रिपरिषद्स्तरमा दिवाभोजको आयोजना गरे ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) हाम्रो लागी निकै महत्वपुर्ण रहेको छ, आर्थीक र सामाजिक रुपमा । उक्त भोजमा सार्क सदस्य मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ। उक्त भोजको आरम्भमा मन्त्री ज्ञवालीले सार्कका प्रक्रिया यस क्षेत्रका जनताको भलाइका लागि प्रभावकारी तथा नतिजामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहभागी मन्त्रीहरूले पनि सार्क शिखर बैठकले गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बिमेस्टेक सार्कलाई बिस्थापन गर्न्न ल्यायको आरोप लागी रहदा नेपालले सार्कलाई बचाइराख्ने प्रयास गरिरहँदा भारतले पाकिस्तानकै कारण सार्कलाई सक्रिय बनाउने कुराको पुरै बेवास्ता गरिदिएको छ। भारतले पाकिस्तानतर्फ इङ्गित गर्दै आतंकवाद नसकिएसम्म सार्कको कुरा गर्नु व्यर्थ हुने बताइसकेको छ। तर भरतले बिमस्टेकलाई निकै महत्व दिएको छ । रोचक कुरा के छ भने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई भारतले सार्कलाई भन्दा धेरै प्राथमकिता दिइरहेको छ । बरु सार्कले चिनलाई समेत समेटेर अघी बढनु पर्दछ ।
भान्साकोठामा ५० मुसाको लालनपालन, महिलाको अनौठो सोख
काठमाडौं । कतिपय मानिसको रुचि नै अनौठो खालको हुन्छ । केही मानिसको जनावरप्रति निकै ठूलो
गुराँसै फुल्यो वनैमा…(फोटोहरु)
ताप्लेजुङ्को कञ्चनजङ्घाको बेँसीदेखि लेकाली क्षेत्रभरि लालीगुराँस फुल्न थालेपछि लालीगुराँसले वनपाखाहरु ढकमक्क । लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय
गौतम बुद्धका २० उत्कृष्ट भनाईहरु
१. लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा जरुरी भनेको राम्रोसँग यात्रा गर्नु हो । २. शरीरलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो
कार्ल मार्क्सको उत्कृष्ट भनाईहरु
कार्ल हेनरिक मार्क्सको जन्म प्रसिया राज्यको लोअर रीन् प्रान्तको ट्रायर् भन्ने ठाउँमा भएको हो ।